September 2, 2021 - Online Hartha
လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ဆုံးမလိုက်တဲ့အဖွား
လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ပညာပြလိုက်တဲ့အဖွားအို အသက် ၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးက သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးကိုအချစ်စမ်းကြည့်မယ် သွေးတိုးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးကိုငေးမောရင်း သူ့ချစ်ဇနီးကို မေးတယ် ။ ငါ ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ရင် မင်းသဝန်မတိုဘူးလား ? ဇနီးသည် အဖြေက တိုရှင်း လိုရင်းပဲ ။No not at all !လုံးဝ လုံးဝ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ Why ? လမ်းဖြတ်သွားတာမြင်တိုင်း ဇွတ်အတင်းလိုက်ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတွေလို ပြေးလိုက်လို့လဲမမှီနှိုင် ကိုက်လည်း ​မကိုက်နှိုင် မှီလည်းမမှီနှိုင် ဟောင်လို့ နားငြီးတာပဲရှိတာ ဘာသဝန်တိုစရာရှိလဲ ???? ဘာမှာမစွမ်းဆောင်နှိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်မှ ဖြစ်ခြင်တာတွေရှေ့တန်းတင် သူဘဲငါဘဲ လက်ရုံးတန်းနေလည်းအပိုဘဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့……။ 😁😁😁 … Read more
မင်ျဂလာဦးည သတို့သမီးမှာ သတိလဈလောကျအောငျ ဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့အဖွဈ
မဂ်လာဦးည ရင်ခုန်သံ”” အားးးးးးး!!!” အော်သံကြားပေမယ့်ဒါသဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် ။ မင်္ဂလာဦးညပေးကိုးးးးးအော်သံကြားပြီး သိပ်မကြာလိုက်. . .လူပျိုကြီး Moe Aung အသံနက်ကြီးဖြင့် ” အမေနဲ့အဖေတို့ရေလာကြပါဦး ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ”“ဟာဒုက္ခတော့များပြီနဲ့တူတယ် ယောက်ျားရေတော့ သားကို သွားကြည့်ဦး´ ”သိပ်မကြာလိုက် အဖေဖြစ်သူမှ ထပ်အော်ပြန်သည် …။“ မင့်းချွေးမသတိမလည်တော့ဘူးဟ ဆရာဝန် အမြန်ခေါ် ”” ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိ ” ကိုယ်လဲတက်မကြည့်ရဲ သွေးသန်ရဲရဲတွေ မမြင်ရဲဘူး အိမ်ထဲကရုပ်ရုပ်သည်းသည်း အသံတွေကြောင့် ဘေးအိမ်ကလူများ ပါရောက်လာကြသည် … … ။ သိပ်မကြာလိုက်။“လမ်းဖယ်လမ်းဖယ် ဆရာလာပြီ´”အဖေကြီးက “မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ဆရာ့ကိုပြောပြလိုက်´´ ”ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆရာရဲ့”ကန်တော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလဲ ညအိပ်ဖို့ ပုဆိုးလဲနေတုန်း သူကထအော်ပြီး သတိလစ်သွားတာပဲ´” “နှလုံးတော့ခုန်သေးတယ် အသက်ရှိသေးတယ် သွေးအားနည်းနေတော့ဆေးချိတ်ပေးခဲ့လိုက်မယ် ” … Read more
လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ငွေစုကြည့်ပါ…
လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ငွေစုကြည့်ပါ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်… အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ ….တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ ၁ပုံလောက်ပေ့ါ ) ….။ တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီးဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ်….Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ ….။ KBZ_Call_Deposits_account လုပ်ထားလိုက်တယ်အဆင်ပြေတဲ့လူ သွားလို့ရအောင်ပေါ့ ….။ အဲ့လိုနဲ့ စု လာလိုက်တာ ဘဏ်စာအုပ်လေး၂နှစ်နဲ့ ၄လ ပြည့် ( ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်နဲ့ ၄လ)မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတယ်။ဘဏ်စာအုပ်လေးခနခနထုတ်ထုတ်ကြည့်ပြီးပီတိတေဖြာတဲ့ အရသာကလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ….။ (တအားမများပေမယ့် မိန်းကလေးမို့လားတော့မသိစာအုပ်ထဲကဂဏန်းခုနှစ်လုံးကို ကြည့်နေရတာနဲ့ကိုအရမ်း စိတ်ချမ်းတေ သာနေပါပြီနော် ….) ချစ်သက်တမ်းတွေတိုးလာတာလည်း သက်သေတစ်ခုပဲပေ့ါနော် … Read more
အိန်ဒွာကြျောဇငျနဲ့ပတျသကျပွီး ထူးဆနျးစှာမကျခဲ့တဲ့ အိပျမကျအကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ မိတျကပျခငျဆနျးဝငျး
အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းစွာမက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် ခင်ဆန်းဝင်း အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ထိပ်တန်းကနေ ရပ်တည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောအိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ လတ်တလောမှာတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅နဲ့ အရေးယူထိန်းသိမ်းခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကပါ အူဝဲကိုဒီကနေ့အထိ မမေ့နိုင်ဘဲ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ကိုပဲ ဆုတောင်းပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ မကြာခင်နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း မိတ်ကပ် ခင်ဆန်းဝင်းက အူဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းစွာ အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလာပါတယ် ။ ” ညကအူဝဲကိုအိပ်မက်မက်တယ် မြန်မာဝတ်စုံဝမ်းဆက်လေးနွမ်းနွမ်းလေးဝတ်ထားတယ် အသားတွေလဲညိုသွားတယ် ကိုယ့်ကိုတွေတော့ဖက်ပြီးငိုလိုက်တာလေ ကိုယ်ကလဲဖက်ပြီးငို သားအမိနှစ်ယောက်ဖက်ပြီးငိုလိုက်ကြတာလေ… ကျမသမီးလေးကျန်းမာချမ်းသာပြီးအန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်းပါစေ အချုပ်အနှောင်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ ” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားရာ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီသတင်းလေးကို ဝေမျှပေးရင်း အူဝဲလည်း … Read more
စံပါယ်၊နှင်းဆီကို ပန်းအပွင့်များများပွင့်အောင်စိုက်ပျိုးနည်း (1) နှင်းဆီအကြောင်း အလှပန်းအိုးနဲ့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေမှာချစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေဩဇာကို တစ်လတခါ တစ်လခွဲတခါ ပုံမှန်ကျွေးပေးရပါတယ်။ မြေဩဇာ ပုံမှန်ကျွေးမပေးလို့ အဖူး အပွင့်သေးသွားတယ် အပင် ထပ်ပြီး မကြီးထွားဘူး အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ အပွင့် အဖူးကြီးတယ် အပင်တွေသန်တယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ ဒီမှာ ကျွေးပေးထားတဲ့ ဓါတ်မြေဩဇာ အရှိန်နဲ့ပါ ဒီမှာက ၃ပတ် တခါ ၁လတခါလောက် အပင်တွေကို ဓါတ်မြေဩဇာ ကျွေးပေးကြပါတယ်၊ ဓါတ်မြေဩဇာ အနေနဲ့က အာမို/နိုက်ထရိုဖော်စကာ 15:15:15 ကို သုံးပါတယ်) နောက်တခုကအလှပန်းအိုးနဲ့ စိုက်တဲ့အခါမှာ နုန်း ဒါမှမဟုတ် မြေကြီးသက်သက်ချည်းပဲ ထည့်ရင်လည်း မြေကြပ်ပြီး အမြစ်ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အပွင့် အဖူးသေးတတ်ပါတယ်။တခါတခါ အပင်တောင် သေသွားတတ်ပါတယ်။ နုန်း/မြေကြီး ကို … Read more
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမေတ္တာကွယ်လွန်ခြင်းတစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူက ထပ်မံကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်တဲ့ မလွင်မီမီကို…
“ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးမေတ္တာ ကွယ်လွန်ခြင်းတလပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူက ထပ်မံကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်တဲ့ မလွင်မီမီကို” မလွင်မီမီကိုက ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးမေတ္တာ ကွယ်လွန်ခြင်းတလပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူက ထပ်မံကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။” ကံကြမ္မာရက်စက်လိုက်ပုံများ(၂.၉.၂၀၂၁) ချစ်ခင်ပွန်း ဦးမေတ္တာ ကွယ်လွန်သွားတာ(၁)လပြည့် ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ် ရေစက်ချအမျှဝေပြီးတာနဲ့ မေမေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသဂြိုဟ်ဖို့ပဲခူးကို အချိန်မှီသွားရမယ်လေ။ ဦး ကွယ်လွန်သွားပြီးဆိုတာတောင်မေမေ မသိသွားရှာဘူးသားသမီးတွေ ငယ်ငယ်တည်းက ဘာသာတရားလုပ်တတ်အောင်အမြဲတမ်းသွန်သင်ဆုံးမခဲ့တဲ့မေမေ ဘုရားကို တနေကုန်ရှိခိုး မျက်နှာသစ်တော်ရေ ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းအချိုပွဲကပ်တဲ့အခါမှာတောင် သွားကြားထိုးတံ အစာကြေဆေးက အစလှုပြီး ညဖက်ခြေဆေးတော်ရေအဆုံး တနေကုန်ကပ်လှူနေတဲ့မေမေ… သားသမီးကန်တော့တဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေစုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေလှူနေတဲ့မေမေ မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတာ သမီးယုံကြည်ပါတယ်။ဦးမေတ္တာကို မေမေ့သားအကြီးဆုံးဆိုပြီး ချစ်လည်းချစ်အားလည်းအားကိုးတဲ့မေမေ အခုတော့ မေမေချစ်တဲ့သားကြီးနောက်ကို လိုက်သွားပြီပေါ့နော်။ သမီးသိပ်ချစ်တဲ့ဦးနဲ့သိပ်ချစ်တဲ့မေမေ ၂ယောက်လုံးကို (၁)လသာခြားပြီးခေါ်ဆောင်သွားလို့ ရင်တွေကွဲလှပါပြီ။ မေမေဆုံးလို့ ကိုယ့်ကို အားပေးနှစ်သ်ိမ့်ပေးမဲ့ဦးကလည်း အနားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ သမီးဘယ်လိုဖြေရပါ့မလဲ။ ရှေ့ဆက်ရမဲ့အနာဂတ်အတွက် သားနဲ့သမီးအတွက် အားတင်းထားပေမဲ့ အခုတော့အားပြန်လျော့သွားပြန်ပြီ။ … Read more
ပြည်သူအချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အောက်စီဂျင် ရှုနေရပြီ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး
ပြည်သူအချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အောက်စီဂျင် ရှုနေရပြီ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီး ဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရတာဟာယနေ့ထက်ထိပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ရှောင်တိမ်းနေစဉ်အတောအတွင်းမှာဆိုရင်လဲကိုဗစ်ရောဂါကြီးကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်၊ဖွေဖွေးကလဲကိုဗစ်ရောဂါကိုကူးစက်ခံနေရကြောင်းကိုလဲသိရှိရပါတယ်၊အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေနော်ဖွေးရေ။ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအောက်စီဂျင်ရှုနေရသော်လည်းကျန်းမာနေကြောင်းကိုသူမရဲ့PageStoryမှာအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်၊ ဖွေးဖွေးလဲအမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီ သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပြည်သူအချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အောက်စီဂျင် ရှုနေရပြီ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီး ဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရတာဟာယနေ့ထက်ထိပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ရှောင်တိမ်းနေစဉ်အတောအတွင်းမှာဆိုရင်လဲ ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်၊ဖွေဖွေးကလဲကိုဗစ်ရောဂါကိုကူးစက်ခံနေရကြောင်းကိုလဲသိရှိရပါတယ်၊ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေနော်ဖွေးရေ။သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအောက်စီဂျင်ရှုနေရသော်လည်းကျန်းမာနေကြောင်းကို သူမရဲ့PageStoryမှာအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်၊ဖွေးဖွေးလဲအမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီ သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပြည်သူအချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အောက်စီဂျင် ရှုနေရပြီ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး….။ Unicode Version ပွညျသူအခဈြတျော သရုပျဆောငျဖှေးဖှေး အောကျစီဂငျြ ရှုနရေပွီ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးကတော့တျောလှနျရေးကွီးမှာပွညျသူတှနေဲ့အတူအမှနျတရားဘကျကတဈသားတညျးရပျတညျပေးခဲ့ပါတယျ။ လမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပုဒျမ၅၀၅ကဖွငျ့မတရားအမှုဖှငျ့ထားခွငျးခံရပွီး ဘေးကငျးရာကိုရှောငျတိမျးနရေတာဟာယနထေ့ကျထိပဲဖွဈ ပါတယျနျော။ရှောငျတိမျးနစေဉျအတောအတှငျးမှာဆိုရငျလဲကိုဗဈရောဂါကွီးကွောငျ့ ဖခငျဖွဈသူကိုဆုံးရှုံးလိုကျရပါတယျ၊ဖှဖှေေးကလဲကိုဗဈရောဂါကိုကူးစကျခံနရေကွောငျးကိုလဲသိရှိရပါတယျ၊အမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးပါစနေျောဖှေးရေ။ သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးကအောကျစီဂငျြရှုနရေသျောလညျးကနျြးမာနကွေောငျးကိုသူမရဲ့PageStoryမှာအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော၊ ဖှေးဖှေးလဲအမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးပါစလေို့ဆုတောငျးပေးရငျးဒီ သတငျးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။ ပွညျသူအခဈြတျော သရုပျဆောငျဖှေးဖှေး အောကျစီဂငျြ ရှုနရေပွီ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးကတော့တျောလှနျရေးကွီးမှာပွညျသူတှနေဲ့အတူအမှနျတရားဘကျကတဈသားတညျးရပျတညျပေးခဲ့ပါတယျ။ လမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပုဒျမ၅၀၅ကဖွငျ့မတရားအမှုဖှငျ့ထားခွငျးခံရပွီး ဘေးကငျးရာကိုရှောငျတိမျးနရေတာဟာယနထေ့ကျထိပဲဖွဈ … Read more
ရေတွင်းပျက်ထဲ ကျနေတဲ့ မြည်းလိုပဲ…
ရေတွင်းပျက်ထဲ ကျနေတဲ့ မြည်း တစ်နေ့မှာ လယ်သမား တယောက်ရဲ့ မြည်းဟာ မတော်တဆ ရေတွင်းပျက်ထဲကို ပြုတ်ကျပါရော ။ မြည်းဟာ သနားစဖွယ် ငိုကြွေးနေခဲ့ပြီး၊ လယ်သမားကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ အကြံထုတ်နေ ခဲ့ပါတယ် ။ မြည်းဟာ အိုမင်းနေပြီ ရေတွင်းဟောင်းကလည်း ဟောင်းနေလို့ မြေဖို့ပြစ်ဖို့ လိုနေပြီ ၊ ဒါကြောင့် မြည်းကို ကယ်တင်ဖို့ မထိုက်တန်တော့ဘူးလို့ လယ်သမားက ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ လယ်သမားဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အကူအညီ တောင်းခဲ့တယ် ။ အိမ်နီးချင်းတွေလည်း ဂေါ်ပြား ကိုယ်စီ ကိုင်ပြီး ရောက်လာကြတယ် ။ ရေတွင်းကို အမှိုက်တွေ မြေကြီးတွေနဲ့ စတင်ဖို့ ကြတယ် ။ အစမှာတော့ မြည်းဟာ သူ့ကို … Read more
အိမျထောငျရေး ပွိုကှဲကွရတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျး (၂)ခု
အိမ်ထောင် ရေးပြိုကွဲကြ ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း (၂) ခု စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲလှပြီး ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ရင်ဘောင်တန်း အလုပ်လုပ်ကိုင် နေရတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု ပြိုကွဲဖို့ ဆိုတာလည်း ဟိုးယခင် ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူ နေပြန်ပါတယ်. နယူးယော့ခ်က သုတေသနပြုမှု တစ်ခုအရ အိမ် ထောင်တစ်ခု ပြိုကွဲရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. ၁-ပဋိပက္ခကိုရှောင်ခြင်းရန်မဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေနေ တယ်လို့ ယူဆရပေမဲ့ မကျေနပ် ချက်ကို ထုတ်ပြော လိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကို ကြောက်ရွံ့လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေလိုက်ခြင်း အားဖြင့် မကျေနပ် ချက်တွေက ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲ … Read more
ဝဲနှင်းခူ အစိုအခြောက် အကင်းမသေပဲ ခဏသာပျောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်နေလျှင်
ဝဲနှင်းခူ အစိုအခြောက် အကင်းမသေပဲ ခဏသာပျောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်နေလျှင် ဝဲနှင်းခူ အစိုအခြောက် ရွာမှမိန်းမပျိုလေးတဦးသည် ခြေသလုံးတွင်ဝဲနှင်းခူပေါက်နေသဖြင့် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ ဆေးပေါင်းစုံဖြင့်ကုသရာ အကင်းမသေ။ခဏသာပျောက် ပြီးပြန်ဖြစ်တော့စိတ်ပျက်နေတာ။ ခွေး/ဆိတ်တွေဝဲစားလျှင် သပွတ်အခါးသီးနှင့်တကြိမ်တည်းပွတ်သည်နှင့် ပျောက်သောကြောင့် အခြားသူတွေကသပွတ်ခါးသီးနှင့် ကုရန်အကြံပေးကြည့်သည်။ အိုးတိုက်တာနဲ့ဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဟုငြင်းသည်။ အမှန်မှာတိရစ္ဆာန် ဆေးနှင့်ကုသည်ဟုအစ။ အနောက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။နောက်တော့ကုဖြစ်သည် ကုနည်းက ဆေးနည်း သပွတ်အခါးသီးအစိုဆို ကျေသွားအောင်ထုပါ။အခြောက်ဆိုအ ပေါ်ယံအခွန်ပါးကိုခွါ။အစေ့တွေထွက်လာမည်။ နောက်နူးလာပြီးအမျှင်တွေ ပျော့သွားသလိုအူတိုင်ပါပျော့လာမည် အနာပေါ်ဖိပွတ်။ပွတ်ပါ။ အူတိုင်မှ ဆပ်ပြာမြှုပ်လိုထွက်လာမည်။၁၅မိနစ် ခန့်လုပ်ပါ။အမြှုတ်တွေအတိုင်းထားပါ ရေမဆေးရပါ။ သေချာအောင် နောက်နေ့တကြိမ်ဆက်လုပ်ပါ။ငါးရက်ခန့်ကြာ မှာစပျောက်သည်။ ဆေးကုပြီးတာ( ၇)လရှိပြီဖြစ်ကြောင်း။ပြန်မထလာကြောင်းပြောပြရာ။ မိမိက ဒီရောဂါပိုးဟာနက်ရှိုင်းစွာနေတတ်လို့ အပေါ်ယံသာသေပြီးအတွင်းကောင်များကျန်နေနိုင်သည်ဖြစ်၍နောက် (၆)လထိကောင်းမှသေချာမှာဟုပြောခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသာဂဒိုးပြောသောမောင်သံချောင်း၏ရောဂါပျောက်ပုံ ကိုသဘောကျသည်။ သူ့မှာခြေနှစ်ဘက်စလုံး ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးထုထယ် ကြီးမားသောဝဲနှင်းခူကြီးဖြစ်နေသူ။ဆေးပေါင်းစုံနေပြီ။မပျောက်။ တနေ့ရွှေတဂုံဘုရား ရေဆိုးမြောင်းလုပ်အားပေးရာသို့ရောက် သွားပြီးကြည့်ရှုနေစဉ်မြောင်းထဲချော်ကျတော့ အနာကတစစ် စစ်နှင့်ခံလို့ကောင်း။ သုံးပေကျော်နက်သောမြောင်းထဲမှာတနာရီကျော် … Read more